Ukuhambelana kweTaurus kunye noLeo: Ubuhlobo, uthando kunye nezesondo - Iimpawu Zezodiac
Ukuhambelana kweTaurus kunye noLeo: Ubuhlobo, uthando kunye nezesondo
Inqaku lokuhambelana kweTaurus kunye neLeo kuphahla! Xa uzisa iTaurus kunye noLeo kunye, udibanisa iTaurus 'imfuno yothando kunye nokuqhuba kukaLeo. I-Taurus luphawu olusebenzayo, olusengqiqweni, olusisigxina lomhlaba we-zodiac. Indalo yabo yomhlaba ibenza ukuba babe lula-kwaye behle-emhlabeni. Iimpawu zokugqibela ziimpawu ezimbini uLeo wentlalontle azifumana zinomdla. ILeos inekratshi, iyazithemba, kwaye inobungangamsha, ebhenela ubuhle boTaurean.
Le duo idala isibini esinegunya kuzo zonke iindlela zebinzana. Bobabini bafuna izinto ezintle ebomini kunye nokwandisa ulonwabo lwabo. Ngokudibeneyo, bangamandla okubala, kuba banokulima kuwo nawuphi na umqobo ukuze baphile amaphupha abo. Zombini ezikhuthazayo, iTaurus kunye neLeo zingamandla angenakuthintelwa xa kubonakala iminqweno.
Ngokuya kakhulu kwiTaurus kunye neLeo combo, ngaba oko kuthetha ukuba kuhamba ngokuhamba phambili? Ewe, ukudibanisa akukho ngaphandle kwemigibe. Kuyinyani ukuba zombini ezi zimpawu zinesisa, zithembekile, kwaye ziyazithemba. Kodwa, kuyinyani ukuba iTaurus kunye noLeo banokuba nazo xa benomona kwaye benqena xa izizathu zisilela kubo. Le miqobo yinto iTaurus kunye noLeo abanokoyisa. Ngomsebenzi nokuzinikela, le duo inokuba nothando oluhlala ixesha elide.
Taurus kunye noLeo uLuhlu lweZiqulatho
Ukuhambelana kweTaurus kunye neLeo
I-Taurus kunye no-Leo Love
I-Taurus kunye ne-Leo Sex
Indoda yaseTaurus kunye noLeo ukuhambelana komfazi
Umfazi weTaurus kunye noLeo Man ukuhambelana
I-Taurus kunye ne-Leo Love Match Wrap-Up
Iimpawu eziqhelekileyo phakathi kwabo zenza i-Taurus esempilweni kunye ne-Leo yokuhambelana. I-Taurus bubuntu obungavumiyo ukuba uLeo angabahoyi. Bafuna ingqalelo kwiqabane labo. I-Taurus ifuna uthando oluninzi ukuze izive ikhuselekile. U-Leo uyafana ngokufuna ingqalelo, kuphela ngenxa yezizathu ezahlukeneyo. Ingathi uLeo 'ngukumkani' kwaye ufuna ukunconywa ngabantu.
I-Taurus ithanda yonke into entle, kwaye uLeo unembonakalo entle. Eyona nto inomtsalane, ewe, ngumane wabo we-wavy. Ingqondo eyomeleleyo yokuthinta yeTaurus ibenza ukuba babe nexesha elide lokubaleka iminwe yabo ngeenwele zikaLeo.
Ubuntu obunomdla bakaLeo bhenela kwiTaurus. Isakhono sendalo sikaLeo sokutsala abantu kubo ngumthombo wamandla. Ukuzithemba kwabo kubiza iTaurus 'efuna iqabane elomeleleyo. Kukho into iTaurus efumanisa ukuba iyathandeka malunga nezakhono zikaLeo zokunxibelelana ngokugqibeleleyo. Kodwa, ngumlilo wabo wangaphakathi weTaurus onomtsalane kunkunzi yenkomo eyakhiwe kakuhle.
Bobabini iTaurus kunye noLeo bayazixabisa ezo zinto zinobunewunewu kwaye zilungile. Xa aba babini besakha ikhaya kunye, yitempile yeTaurus nenqaba kaLeo. Imisebenzi yobugcisa isasazekile kuyo yonke indawo, eyona nto intle kakhulu yokuhombisa ngaphakathi isebenza njengasemva.
Akukho nto ingekhoyo kwikhaya laseTaurus naseLeo njengoko bayichaza njengendawo engcwele. Bobabini banomnqweno wokuba nosapho. Njengabazali, iTaurus izisa uzinzo kwaye uLeo uzisa ubuchule etafileni.
Ubudlelwane beTaurus kunye noLo bakhiwe ngokuthenjwa. I-Taurus ifuna ukunyaniseka ku-Leo nanjengoko u-Leo 'efana no kumkani' efuna kwiTaurus. Ukuba naliphi na iqela lingcatsha elinye, benza ngokuchasene nendalo yabo. Xa ukungcatsha kwenzeka kwiTaurus kunye noLeo bathanda combo, mancinci amathuba okubuyela kwimeko yesiqhelo. Ukuzithemba kwabo abazama ukwakha kwakhona akusayi kuphinda kufane kwakhona.
Ukunyaniseka nenyaniso ziintsika zobudlelwane ezixhasa umgangatho weTaurus kunye noLeo unxibelelwano. Xa inyaniso nokunyaniseka kulawula, akushiye ndawo yomona. Ngo-Leo ekubeni sisidalwa sentlalontle, iTaurus kufuneka ikwazi ukuthemba amaqabane abo. I-Taurus inqwenela ukhuseleko, kwaye ukungathembani okuncinci kunokubenza babe yinkomo enomsindo!
Isitshixo sonxibelelwano olusondeleyo phakathi kweLeo kunye neTaurus lunxibelelwano. Esi sibini kufuneka sithethe ngento abayinqwenelayo. Kuya kufuneka babelane ngeemfihlo ezisondeleyo ukuba baya kuba nzulu phakathi kwamashiti.
I-Taurus ne-Leo benza abahlobo abakhethekileyo. Obu buhlobo bunokusebenza njengesiseko sobudlelwane babo obuhlala buhleli. Ubuntu babo zizinto ezimbalwa ezifanayo. Kodwa, banokwahluka okwaneleyo malunga nabo ukugcina ubudlelwane bunomdla.
Bobabini kufuneka bavumele elinye igumbi lokukhula komntu nangona ubudlelwane buya kuhlala buhleli. Ukuba iTaurus ifumana izinto ezininzi kwaye inamathele kuLeo, yinto enkulu yokujika. U-Leo uqala ukuziva ebambekile kulwalamano. Ukuba uLeo unzima kakhulu, iTaurus iyavukela.
Unxibelelwano phakathi komdlalo wothando weTaurus kunye noLeo kwiibhedi ezivela kumlilo onenceba. Kodwa, aba babini kuya kufuneka basebenze kuyo ukuze basuse izinto emhlabeni. Kuthatha ixesha elincinci ukutshisa amadangatye enkanuko. Kutheni, aba bantu babini besondela kwisini ngeendlela ezahlukeneyo. Ngapha koko, iTaurus kunye noLeo banobuntamo obunenkani obukhokelela kulindelo olumiselweyo kwigumbi lokulala. Zombini ezi zinto zithanda ukuthoba isantya esithandanayo kubantu abathandanayo nabathandanayo.
I-Taurus iyathanda xa uLeo ebapompa. Zizidalwa zenyama ezonwabela ukubonwa kwangaphambili kunye nokuqunjelwa. I-Taurus ilindele ukuba uLeo enze inyathelo lokuqala kwaye kungenjalo. U-Leo, kwindima yabo 'yomlawuli', ulindele ukuba isithandwa sakhe sibakhonze. Yongeza umnqweno wabo wokuba 'bathambekele' kwiindlela zabo zobunkokeli eziqaqadekileyo, kwaye oku kufanelekile kufikelela kwisiphelo.
Incoko malunga nokuba ngubani okhokelayo kufuneka yenzeke. Ingumbono olungileyo ukuba babelana ngokukhokela, ke umhlaba wokudlala uhlala ulungile. Iya kuqinisekisa ukuba akukho qela liyityeshelayo enye imfuno yokuthambisa ingqalelo. Nje ukuba iTaurus kunye noLeo baqonde ukuba ngubani okhokelayo, akukho nto ibathintelayo ekufudumaleni amashiti!
I-Taurus izisa imfesane kwigumbi lokulala ngelixa uLeo ezisa inkanuko. Njengoko nganye inandipha umdlalo weqonga kunye nesenzo senkanuko, lomdlalo wothando wenzela abathandi abagqibeleleyo. I-Taurus inovakalelo kwaye inomdla. Ingathi banokufunda ingqondo yeqabane labo uLeo. Ngokwenza njalo, bafuna ukwanelisa yonke iminqweno anayo uLeo, kwaye uLeo wenza okufanayo ukubuyisela iTaurus.
I-Taurus, njengophawu lomhlaba, iyathanda isini se-vanilla. Wonke umnwe kufuneka uthande, uthambe, kunye nemvelo. U-Leo, njengomqondiso womlilo, ulinga ngakumbi. Ke, kuya kufuneka baqinisekise iTaurus ukuba ikhulule malunga nokulinga. Kuba iTaurus iyalucekisa utshintsho, incoko inokuba ngumceli mngeni omkhulu kunokuba uLeo elindele.
Unxibelelwano lweTaurus kunye neLeo
Ukulinganiswa okuhle kweTaurus kunye neLeo kuxhomekeke kunxibelelwano oluhle. Aba bantu babini basebenza kakuhle kuba bobabini banobuqili kwaye banobuhlakani. ULeo unxibelelana kakuhle kakhulu. Ukukwazi ukunxibelelana kubangelwa kukuba nentlalontle kangaka! I-Taurus iyabuthanda ubuhle kunye nokuqina kolwimi, kwaye ukuyibona njengamandla okudala, yinkosi yayo! Le duo ihlala iwazi amagama afanelekileyo okuthandana!
Iingxaki zingavela kwisebe lonxibelelwano nangona! Khumbula, sisebenzisana nenkunzi yenkomo enenkani kunye nobuntu bengonyama obunoburhalarhume apha! Ukuba iTaurus iba nenkani malunga nayiphi na imbono, yiza esihogweni okanye emanzini aphezulu abayi kuguquka kuluvo. Inkani kaTaurus yanele ukuqhuba uLeo mad! Kodwa, uLeo ikwayindlela efanayo apho i-ego yabo ingena khona endleleni. Xa uLeo ecinga ukuba banyanisile, akukho nto ibakholisayo ngenye indlela! Wonke umntu usemanzini ngelixa uLeo ehamba ngenqanawa yakhe elungileyo!
Ukufumana indlela yomhlaba ophakathi kwenza olu lwalamano lusebenze. Ukuba esi sibini sidlala umdlalo olungileyo akukho mntu uphumeleleyo. I-Taurus kunye ne-Leo zingangqina zinenkani kwaye zinekratshi. Baphela ngokungena kukungavisisani okusisiyatha okuphelisa ubudlelwane. Endaweni yokubamba ingqumbo kunye nengqumbo, iTaurus kunye noLeo kufuneka baphucule indlela abanxibelelana ngayo. Kuya kufuneka ukuba babe bhetyebhetye ngakumbi nezimvo kunye nezimvo zabo.
Ukungqubana kweTaurus kunye neLeo
Ayothusi into yokuba kukho ukungqubana komdlalo wothando weTaurus kunye noLeo. Masijongane nayo; Sidibanisa izidalwa ezimbini ezahlukileyo kakhulu kumanyano lothando. Awuyikhulula inkunzi yenkomo kunye nengonyama kwibala lemidlalo ngaphandle kwesiphumo. Ayizizo zonke izinto eziza neroses kumanyano lomntu weTaurean kunye noLeo.
Enye into, iTaurus ilwa nemicimbi efana ne-inertia kunye nokungakwazi ukutshintsha. I-Taurus ayikuthandi ukuhamba kuba ukuzihambisa ngokwalo lutshintsho. Owu, kwaye 'ukungakwazi' ukutshintsha kubhetele kwathiwa 'UKUNGATHANDI' ukutshintsha. Ukunqongophala kweTaurus yokuhamba kunye nokwala ukutshintsha kukhokelela ekumeni. Iyaphazamisa uLeo ojolise kumanyathelo othanda ukuba sendleleni. U-Leo konke malunga namabhongo.
Yintoni enomdla ngeTaurus kunye neLeo combo kukufana kwii-motto zabo. U-Leo une motto 'Ndifuna.' I-Taurus inesiqubulo esithi 'ndinayo.' Yomibini le miqondiso ithanda izinto eziphathekayo kwaye iyabuthanda ubukho be-posh.
Nangona le nto inokubenza bahambelane, yinto eyingozi efanayo. Ezi zimbini ziba semngciphekweni wokuchitha ngokungakhathali kunye notyalo-mali olunobungozi. Esi sibini singonwabela ukuqesha i-akhawunti yangaphandle ukuba sibaphathele izinto. Ke kukho ulawulo lomonakalo lwemali olukhoyo xa kukho imfuneko.
Indoda gemini kunye nomhlaza womfazi ukuhambelana
I-Taurus kunye ne-Leo Polarity
Kwinkwenkwezi, uphawu ngalunye luhambelana nepolarity. Ezi polarities zimbini yimikhosi yeYin kunye neYang. Yin ngowasetyhini. UYang uyindoda. Ukubhekiswa kwamadoda nabasetyhini ziindlela zamandla, hayi izingqinisiso zesini.
I-Taurus ihamba kunye neYin. U-Leo uhambelana namandla eYang. Ngaphezulu, ubudlelwane beTaurus kunye noLeo lunxibelelwano oluhle. Umxube we-Yin olinganayo kunye neqela eliphikisayo le-Yang livumela ukulingana kweempembelelo ezinamandla. Konke kulungile ukuba nje amaqela kubudlelwane beTaurus kunye noLeo egxila kumandla.
I-Yin kunye ne-Yang imikhosi iyakwazi ukwahlula. Xa oku kusenzeka, amandla e-Yin ekhulayo akhula enobukrwada kunye nokuzincama. Xa kuninzi amandla e-Yin akhoyo, enza ukuba umntu abe ndlongondlongo kwaye alawule. Ibhalansi yinto abantu abanokuyifumana kwakhona.
Ukulungisa ngaphandle kokuvumelanisa amandla e-Yin, iTaurus kufuneka yamkele ngakumbi amandla e-Yang. Ke, iTaurus kufuneka iqiniseke ngakumbi kwaye ijolise ekwenzeni. U-Leo unokulungelelanisa amandla e-Yang ngokwamkela amandla amaninzi e-Yin. U-Leo kufuneka avule ngakumbi kwaye amkele.
I-Taurus kunye ne-Leo Aspects
I-Taurus kunye ne Leo ziimpawu ezintathu ngaphandle kwivili lasezulwini. Umgama wenza inkalo yesikwere. Lo mbandela ulinganisa ukuhambelana kweTaurus kunye neLeo. Ngomba wesikwere, umgama wenza i-angle ye-90-degree ebukhali. I-engile ibonisa ubunzima kummandla wokuhambelana kophawu lwe-zodiac.
Xa ubuntu beTaurus kunye noLeo bejoyina ubudlelwane, buvuselela iimvakalelo ezindala. Ezinye zeemvakalelo azikhathalelwa kangangeminyaka. Kunokubakho umsebenzi we-karmic i-Taurus kunye ne-Leo ubuntu ekufuneka beyenzile ukubuyisa ibhalansi. Unxibelelwano lumalunga nokujongana nokwenzakala ngokweemvakalelo, ke iintlungu zibekwa ekuphumleni.
Ngo-Leo no-Taurus abafuna ubunkokheli kulwalamano, ezinye iingxoxo ziyavela. Umbuzo othandwayo ngulo, 'Ngubani umphathi?' Impendulo yombuzo wokugqibela ichaphazela ukungqinelana kweTaurus kunye neLeo. Bobabini iTaurus noLeo baya kudanduluka, 'Ndingu.' Umzabalazo wamandla uqhelekile koku kubhangqwa, kodwa kunjalo nokungqubana kweeshedyuli. Akukho nalinye iqela elithandayo ukuva igama elithi ukulalanisa. Kodwa, yinto ekufuneka beyamkele ukuze baphumelele kulwalamano.
Kukho ukuphumla okuncinci kumdlalo weTaurus noLeo. Le duo kuya kufuneka isebenze ngakumbi ukwenza uxolo phakathi kwabo. Uthando aluyi kukhula kwindawo egcwele isiphithiphithi. Kuyenzeka ukuba iTaurus kunye noLeo bakwazi ukuhlala kamnandi. Iindlela zokuseka uxolo kukuzimisela kweqela ngalinye ukulalanisa. Ukwamkela iziphene zeqabane kunye nokugxila kumandla kukwaboleka ukuhambelana.
I-Taurus kunye ne-Leo Elements
Kwinkwenkwezi, uphawu ngalunye luhambelana nento. I-Taurus iyahambelana nomhlaba. U-Leo uhambelana noMlilo. Kakade, ezi mpembelelo zixinzelela imeko engahambelaniyo yobudlelwane beTaurus kunye neLeo.
Umlilo utshisa uMhlaba, kwaye uMhlaba unokuwutshisa umlilo ukuba uye wongamela. Kodwa, uMhlaba unokusebenza njengeziko lomlilo kwaye ubonelele ngendawo ukuze uphumelele. Emva koko, umlilo unokuba ngumthombo wobushushu kulomhlaba ubandayo. Ke, konke oku kuthetha ntoni kumdlalo wothando weTaurus kunye noLeo?
Esi sibini kufuneka sigxile ekudlaleni kwezona mpawu zazo zibalaseleyo. I-Taurus izinzile kwaye ithembekile. Bafuna ubudlelwane obuqinileyo. Ukuseka iingcambu kubalulekile kubuntu beTaurus. Kodwa uLeo umalunga nolonwabo kunye nokuzonwabisa. Bafuna ukwandisa iihorizons zabo kwaye banamava okupompa i-adrenaline. Ukuba omabini amaqabane ahlala eguquguqukayo, ivumela igumbi lokuphefumla kulwalamano. Ngaphandle koko, idabi le-epic elingalinganiyo lilindele!
Ukuphawula i-Taurean enentloko yenkomo akusoloko kungumbono olungileyo. Kananjalo ayisiyongcamango ilungileyo ukuba nengqumbo yengonyama eyomeleleyo. Ulungelelwaniso yinto eyenza olu lwalamano lusebenze ngcono. I-Taurus inika uLeo indawo ekhuselekileyo emhlabeni kunye nebhotwe elicocekileyo lokuza ekhaya ngalo lonke ixesha. U-Leo unokunceda iTaurus ukuba idlule kwezona mpazamo zabo zinkulu: Ukuma.
Ubuntu bukaLeo obuthandayo buyakuthanda ukudotshwa, kwaye iTaurus ijongana nemfuno. I-Taurus ifumana ukomelela kunye nohlobo lwenkululeko yobuntu bukaLeo ngaphaya kokulukuhla. Le duo inokuyenza ukuba ikulungele umsebenzi oqhubekayo ongaphambili.
Ubudlelwane beTaurus kunye noLeo buyachuma xa befumana izinto abathanda ukuzenza kunye. Indoda yaseTaurus kunye noLeo Woman bahluke kakhulu kwaye kufuneka babelane ngexesha lomsebenzi wokucwangcisa. Nangaliphi na ixesha esi sibini sizinikeleyo ekwabelaneni kufuneka sibandakanye ukuthanda kwabo bobabini.
Imihla yocwangciso, iholide, kunye nemibhiyozo yeholide kufuneka ibe ngumzamo wamashumi amahlanu anamashumi amahlanu. Yiyo kuphela indlela yokulunga. Iqinisekisa ukuba iqabane ngalinye lifumana ulwaneliseko olulinganayo kubudlelwane. Kodwa yeyiphi imisebenzi uTaurus Man kunye noLeo Woman abafuna ukuyenza kunye?
Yintoni iTaurus kunye noLeo bayavumelana ngayo yindlela yokuphumla. Zombini zingamakhaya kwaye ziyonwabele imeko yasekhaya. Yonke into esekhaya lomntu weTaurus imalunga nokududuzwa kwesidalwa. Izixhobo zamva nje zigcwalisa ikhitshi kuba ukutya yenye yezona zinto ziyolisayo eTaurus. Ewe, uLeo ukhwele ekwabelaneni ngemeko yekhaya kunye nokutya okuhle.
Ikhaya labo liya kuba neziko elingaphezulu kwesinye kunye nomngxunya womlilo, njengoko ezi zinto zibhenela ku-Leo olawula ngelanga. Iibarbeque zosapho kunye namaqela entlalontle ngasemva ziyonwabisa kuLeo. Kodwa, okufanayo akusoloko kumnandi kangako kumaTaurean agcinwe ngamanye amaxesha. Kodwa, xa udlala ngokufanelekileyo, iTaurus inikezela kwiimfuno zikaLeo kwisangqa sabo sabahlobo abasondeleyo.
Ixesha lokungqengqa kunye nokuba wedwa yinto abayithandayo nabo. Logama nje eloxesha liya kudinwa kukuhamba kwexesha kwindalo yendalo ukonwabela indalo. Zombini i-Taurus zomhlaba kunye ne-Sun-Rule Leo ziyayixabisa imisebenzi yangaphandle enje ngekampu kunye nokuhamba intaba. Izenzo ezinjalo kufanelekile ukuba zibe yimeko yeempelaveki rhoqo.
Apho izinto ziyahluka yimfuno kaLeo yokuhlalisana. Ngokuqinisekileyo, itheko lendlu elinamaxesha athile liyabonwabisa abantu abathandanayo. Ukuzonwabisa kunye nabanye kuphucula ukuhambelana kweTaurus kunye neLeo. Kodwa uLeo naye ufuna ixesha lokuba yedwa nabahlobo. I-Taurus inezinto kwaye inokuba nomona ngemfuno ka-Leo yexesha yedwa ngaphandle kobudlelwane. Indoda yaseTaurus kuya kufuneka iyeke ukungathembani kuwele ecaleni kwendlela de uLeo aqinisekise ngenye indlela. Kuyanceda ukugcina uxolo kwaye kuthintela uLeo ukuba azive ebambeke kubudlelwane.
Ukuzinikela phakathi kwendoda yaseTaurus kunye neLeo Woman ayinakuqhekeka. Zombini zinamandla okwahlula okulungileyo nokubi. Zombini ubuntu zifuna ukunyaniseka okukhulu kumaqabane abo abathandanayo. Ngokulindelekileyo kucacile ukuba kuya kubudlelwane, kunqabile ukuba elinye iqabane liyakopela.
Ngaphandle koko, uLeo uyazi umsindo weTaurus kwaye ufuna ukungayiceli! Kwangokunjalo, uLeo uyicacisa kwangethuba into eyenzekayo xa umntu ekopa. Umzuzu ufumanisa ukungathembeki, uya kunqumla iqabane leTaurus Man ngokukhawuleza. Akukho sixa sokungxengxezela esifumana indlela yokubuya kwakhona.
Umfazi waseTaurus kunye noLeo Man banolwalamano oluhle lothando, kodwa nokuba luluqhagamshelo olungcono kwezesondo! Kungenxa yokuba esi sibini sinxibelelana malunga neemfuno kunye neminqweno yabo. Unxibelelwano olulungileyo luphambili kuthando nakwigumbi lokulala, ngakumbi ngomdlalo wothando weTaurus kunye noLeo. Ngoba? Kuba iTaurus Woman kunye noLeo Man bamalunga nokuhlalisa uyolo lwabo. Ingabamfamekisa kwiimfuno zeqabane labo ngaphandle kokuba iqabane lithethe!
Umfazi waseTaurus kunye noLeo Man bafumana ukhuseleko kunye nokukhuseleka ngokweemvakalelo zezona mfuno zikhulu zeliqela. Kuba uLeo Man uhlala engudlalani kwaye enentlalontle, kuyakufuneka aqinisekise ngomfazi waseTaurus ukuba nguye kuphela ebomini bakhe. I-Taurus inqwenela ukuba noluvo lokunyaniseka kwaye uLeo Man uya kwenza kakuhle ukuba angamenzi ayibuze.
Umfazi waseTaurus uyawathanda amandla oLeo Man wakhe njengoko eyifumana inomdla ngokwesondo. Ubeka uphawu kwiLeo Man eyinxalenye yolwalamano olonwabisayo. Njengo 'kumkani' ufuna ingqalelo engapheliyo. Ubetha i-ego yakhe ngawo onke amagama afanelekileyo. Ijika loo ngonyama yoyikekayo ibe yinkwenkwana ebethiweyo!
Banqwenela izinto ezintle, ubudlelwane beTaurus kunye noLeo bujolise kubuhle. Aba babini bayonwabela indalo okanye bonwabele ubuhle bendlu. Ukuhamba okude kwindalo okanye ukuthambisa ilanga ecaleni kolwandle, ezi zinto zimbini zithanda ukukhanya kwindalo. Zombini zinemvakalelo efudumeleyo echaphazela ubomi babo, unxibelelwano, kunye nokuhonjiswa kwasekhaya.
Ingaphakathi lomfazi waseTaurus kunye nekhaya likaLeo Man linemibala yomhlaba. Zininzi iifestile ezinkulu ezivulekileyo zokuvumela ukukhanya kube lula. Uphahla lwetyalike lubhenela kwimfuno yendawo kaLeo. Iitoni zokuphosa imiqamelo, ilinen ebalaseleyo, iintyatyambo, kunye namakhandlela zongeza kwimvakalelo yentuthuzelo yaseTaurus.
Abanye baya kubuza ukuhambelana kweTaurus kunye noLeo. Kungokwemvelo ukuzibuza ukuba kunokwenzeka ukuba ubudlelwane phakathi kwabo buphumelele. Zonke izinto zinokwenzeka ngokuzinikela kunye nokusebenza nzima. Imiceli mngeni ubuso beTaurus kunye neLeo ayinakwenzeka ukuba boyise. Ngobuchule obuncinci kunye nentsebenziswano, iTaurus kunye noLeo banokwenza uthando lokwenyani.
Ulwalamano lunethuba elingcono lokuhlala ixesha elide ukuba banxibelelana neemfuno zabo. Kuya kufuneka ukuba balalanise kubani umphathi. Ukutshintshana ekukhokeleni kuya kuqinisekisa umdlalo olungileyo kubo bonke ababandakanyekayo.
Ngaba uyifumana into yokuhambelana phakathi kweTaurus neLeo ziyamangalisa? Ngaba uzifundile izinto ongazaziyo ngobuntu bukaTaurean noLeo? Ngaba uyafuna ukufunda banzi? Akukho xesha linje ngoku!
Zive ukhululekile ukuphonononga lonke ulwazi lokuhambelana olufumanekayo kwi-Daily Horoscope Astros! Qala ukuphonononga ubudlelwane bakho. Jonga indlela ohambelana ngayo nabantu obathandayo! Unokufunda izinto malunga nomntu omthandayo ongazange wazi! Khangela ngoku oko kubhaliweyo ezinkwenkwezini!
Funda konke malunga neLeo Zodiac Sign
Cofa ukuze ufunde konke malunga Iimpawu zika-Leo, Ubuntu, kunye neempawu !
Ufuna uthando? Cofa ukuze ufunde konke malunga Ukuhambelana kukaLeo !
Fumana ulwazi olunzulu malunga Leo Man !
Chaza imfihlelo ye Umfazi kaLeo !
Ngaba Unentombi ka-Leo okanye uNyana? Cofa ukuze ufunde konke malunga ne Umntwana kaLeo !
umfazi ongumfazi kunye netaurus ubuhlobo bomntu
I-pisces yabasetyhini kunye ne-taurus yokuhambelana kwendoda
leo man leo umfazi ukuthanda ukuhambelana
Ithetha ukuthini xa uphupha umntu ongamaziyo